Magacii iyo muunadii fanka soomaalida oo meel xun gaadhay! – Somali Paper
Magacii iyo muunadii fanka soomaalida oo meel xun gaadhay!
Waxaa la daabacay December 2, 2017
2 daqiiqo ku akhri
Berisamadkii inta qalinlayda ah ee wax qori jirtay, intii suugaanta curin jirtay, inta codkooda heesaha ku qaadi jirtay iyo intii murtida iyo madadaalada ku caan baxday, intuba Waxay ahaayeen kuwa Dadku wada majeerto oo bulshadu ku qanacdo kuna raaxaysato fankooda, balse fankii milgaha iyo Maamuuska wacnaa xiligiisii la soo dhaaf.
Waxaa soo baxay duul cusub oo badankoodu alifbeetada fanka aan si fiican u dhigan oo aan la jarabarin.
Sidaa darteed fankii dahabiga ahaa ee soomaalidu lahayd waa gabaabsi marka aad ka eegto dhinacyo badan. Waxaana soo batay fanka raqiiska ah ee bilaa ujeedada ah, bilaa qiimaha iyo bilaa nuxurka ah.
Yaab iyo amakaag ayaa ku dilaya marka aad maqasho Heesaha qaarkood iyo halka uu gaadhay heerkoodu, midhahooda iyo habdhacooda run ahaantii waa mustawe Aad u liita oo aan hadda ka hor fanku soomaalidu abid gaadhin. Waxaana suuqa soo galay heeso aan dux iyo dhadhan-toona lahayn kuwaa oo ceegaaga barta muuqaalada baahisa ee Youtube .
Waxaa kale oo ay heesaha qaarkood meel kadhac ku yahiin dhaqanka iyo garaadka bulshada waxaana ku Jira muuqaalo yaq-yaqsi leh oo ah dhaqan bi’is iyo anshax-xuma Baahsan oo la faafinayo.
Hadaba hadii uu cabirkii fanku noqday soo caanbax loo marayo Wado liidata iyada oo aan dookha bulshada la ixtiraamayn waxay ila tahay waa khasaare iyo dhaawac weyn oo soo gaadhay fanka soomaalida oo ah fan hodan ah. Qani ka ah murtida , qani ka ah maansada, qani ka ah dhaqanka qani ka ah anshaxa suuban.
Waxaan tix gaaban oo uu ku tilmaamayo in aanu fanka ku haboonayn xoog-xoog iyo iska keenkeenid ee uu yahay deeq alla baxsho ka soo dheegtay alla ha unaxariistee abwaan Dhoodaan waxaanu yidhi:
Dirqi gabaygu kuma fiicniyo,waan darooryamiye
Kaga dayasho door kuma noqdiyo,xaraf ladoondoone
Darsi ma aha lays baro xigmadi, way da’a weyn tahaye
War waa deeq ilaah baxshiyo, doobir gooni ah’e.
Haa waa dhab qofna dirqi iyo istus kuma noqon karo heesaa ama allifaa ee waa doobir iyo hibo gooni ah oo aan cid kasta loogu roonaan ee dadka qaar alle hibo u siiyay.
Dhalan-rogga fanku waxa uu ku socdaa xawaare dheeraynaya hadaba dadka doonaya in ay ku soo caanbaxaan sidaa iyaga oo ka aradan cod la dhagaysto iyo hibo kalaba hadana kusii indha adag waxay illa tahay inaan marnba laga ogolaan laakiin la waaniyo loona caqli celiyo. Waayo fanku Waa Dhaxal umadeed oo uu jiilba jiil u gudbiyo waajibna ay tahay in la ilaaliyo lana dhowro laguna faano.
Qormooyin la xiriira Slider
Waxa uu aha safar aan in muda ah maskada ku hayay bal inaan mar uun socdaal ku gaalaa-bi…
4 daqiiqo ku akhri
Xatooyo xirfadaysan oo ay Aktar ka Tahay Shirkada Cambridge Analytica
Hadii berigii hore welwelka ugu badani ahaa xatooyo hanti nool iyo moodba leh imik…
Caqliga caafimaadka qaba waxa uu ku jiraa jidhka caafimaadka qaba, tani maaha odhaah qu…
Soo daadi qormooyin la xiriira Slider